လူသားအားလုံးအတွက်: August 2012
မလေးရှားနိုင်ငံ ကပုန်း(၇) ရက်သားသမီးများ နာရေးကူညီမှုအသင်းမှ တတိယအကြိမ်မြောက် သွေးလှူဒါန်းပွဲ ကျင်းပပြီးစီး
မလေးရှားနိုင်ငံ ကပုန်းမြို့တွင် တည်ထောင်ထားသော (၇) ရက်သားသမီးများ ကပုန်း နာရေးကူညီမှု အသင်းမှ တတိယ အကြိမ်မြောက် သွေးလှူဒါန်းပွဲ အစီအစဉ်ကို ၂၆.၈.၂၀၁၂ တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် ၈နာ၇ီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ ကပုန်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ ကပုန်း နာရေးကူညီမှု အသင်းက သွေးလှူဒါန်းပွဲ ပြုလုပ်ဖြစ်တာဆို အခု အကြိမ်နဲ့ဆို တတိယအကြိမ် မြောက်ပေါ့နော်။ သွေးလှူဒါန်းပွဲ ပထမကြိမ် ဒုတိယအကြိမ် ၊ တတိယအကြိမ်တွေကို ကပုန်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာပဲ ပြုလုပ်ဖြစ်တာပါ။ အခုလို သွေးလှူပွဲလေး လုပ်ဖြစ်တဲ့ ရည်ရွှယ်ချက်က ဆင်းရဲ့နေတဲ့ သူတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ နေရာ ဆေးရုံ ၊ ဆေးခန်းတွေမှာ အခက်အခဲမရှိ အသုံးပြုနိုင်အောင်ပါ။ ဒီနေ့သွေးတွေကို
ကေအယ် ကွာလာလမ်ပူ သွေးလှူဘဏ်ကို လှူဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ အခမ်းအနားကို မနက် ၈ ကနေ ညနေ ၅ နာရီအထိ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ လုပ်ဖြစ်တဲ့ သွေးလှူပွဲမှာ သွေးအလှူရှင် ၄၂၅ ယောက်စရင်း ပေးသွင်းပြီး တကယ်လှူဖြစ်တဲ့ လူတွေက ၃၅၂ ယောက်ပဲ လှူဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ လူတွေက ဆေးစစ်တဲ့ အချိန်မှာ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ကျန်းမာရေး ကိစ္စလေးတွေ ရှိနေလို့ မလှူရပဲ ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲဒီ အတွက်လည်း ကျွန်တော်တို့ဖက်က တောင်းပန်ပါတယ်။
ဒီနေ့ သွေးလှူပွဲမှာ လာရောက်ကြတဲ့ လူဦးရေ ၇၀၀ လောက်ရှိပါတယ်။ မနက်ပိုင်းကနေ ညနေ အထိပါပဲ။ လာသမျှ လူတွေအတွက် အကျွေးအမွေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး အဖက်ဖက်မှ ကုသိုလ်ပြု လှူဒါန်းကြတဲ့ အလှူရှင်များကိုလည်း အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လာရောက်ပြီး လုပ်အားဒါန ပြုတဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံ အတွင်းရှိ ပရဟိတအဖွဲ့များကိုလည်း အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ဟု (၇) ရက်သားသမီးများ နာရေးကူညီမှုအသင်း ဥက္ကဌဖြစ်တဲ့ ကိုဆန်းဝင်းမှ အွန်လိုင်း ရေဒီယို မီဒီယာသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
လူသားတိုင်းအတွက် အရေးပေါ် လိုအပ်လျှက်ရှိသော သွေးလှူဒါန်းပွဲတွင် ရပ်ဝေးရပ်နီးမှ ရွှေမြန်မာအများ အပြား လာရောက်ကြပြီး ကြွရောက်လာကြသော ဧည့်ပရိတ်များအား အစားအသောက်များဖြင့် ဧည့်ခံကာ ၊ သွားလာမှု အဆင်ပြေစေရန် အတွက် ဧည့်အကြိုအပို့ကားများကို စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ မလေးရှားမှ ပရဟိတ အဖွဲ့အစည်း များမှလည်း လိုအပ်သော နေရာများမှ တက်ညီလက်ညီ ဝိုင်းဝန်းကူညီ လုပ်ဆောင် ပေးနေကြပြီး မင်္ဂလာရှိသော နေ့လေးတစ်နေ့ ဖြစ်သလို အားရဖွယ် မြင်ကွင်းလေးကို တွေ့ရှိရပါသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ ကပုန်းမြို့တွင်ရှိသော (၇) ရက်သားသမီးများ ကပုန်း နာရေးကူညီမှု အသင်းအဖွဲ့သည် မလေးရှားနိုင်ငံအတွင်း အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် သေဆုံးသွားသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ နောက်ဆုံးအချိန် နာရေးကိစ္စများကို ကူညီလုပ်ဆောင်နေသော အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး နာရေးကိစ္စများအပြင် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ သွေးလှူဒါန်းမှုများ စတာတွေကို မလေးရှားရောက် ရွှေမြန်များအတွက် အကျိုးပြုနေသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
(မလေးရှား အွန်လိုင်း ရေဒီယို မီဒီယာ)
Posted by Unknown at 1:29 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by Unknown at 11:24 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ယင်းနည်းပညာကို မတ်လက မိတ်ဆက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မာစီဒီးမော်တော်ယာဉ်ကုမ္မဏီရဲ့  ကြိုးပမ်းမှု တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကားကိုယ်ပျောက်ဆိုပေမယ့် အမှန်တော့ အမြင်ကို လှည့်စားခြင်း ဖြစ်ပါ တယ်။ ကားရဲ့ ဘော်ဒီကို စူပါ LED မီးလုံးအရေလွှာနဲ့ ခြုံလိုက်ပြီး ကင်မရာနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ တိုက်ရိုက် ပုံရိပ်တွေကို LED မီးလုံးတွေပေါ်မှာ ထင်နေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုက်ဒရို လောင်စာသုံး F cell ကားလို့အမည်ပေးထားပြီး အမှန်တကယ် ကိုယ်ပျောက်စေနိုင်အောင် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ကားတစ်ကိုယ်လုံး ကိုယ်ပျောက်နိုင်ဖို့အတွက် အပြင်တစ်ထပ်မှာ LED မီးလုံး အရေလွှာခြုံနေရပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ Resolution ကောင်းကောင်းကင်မရာလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလို ပစ္စည်း ပစ္စယ အပိုတွေ မလိုအပ်တော့မယ် ကိုယ်ယောင်ဖျောက်နိုင်တဲ့ ကား နည်းပညာကို မာစီဒီး က မဝေးတော့တဲ့ အနာဂတ်မှာ ထုတ်ဖော်ပြသတော့ မယ် လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဗီဒီယိုကို အောက်ပါလခ့်မှာ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Posted by မိုးယံ at 11:11 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ဧရာဝတီတိုင်း ကျောင်းကုန်းမြို့ ပေါ်ဝယ် င၀န်မြစ်ရေ တတ်ရောက်လွှမ်းမိုးစဉ်
ဧရာဝတီတိုင်း ကျောင်းကုန်းမြို့တွင်း တနေရာကို ယနေ့မြင်တွေ့ရစဉ်
ကျောင်းကုန်းမှာလေ ရေတွေကြီးလို့ လှေလေးစီးလို့ ဘုရားပန်းဝယ်
ကျောင်းကုန်းမြို့ ဆက်သွယ်ရေးရုံးရှေ့ကို ယနေ့တွေ့မြင်ရစဉ်
ကျောင်းကုန်းမြို့ အလုပ်သမားများအဖွဲ့ရုံးရှေ့ကို ယနေ့တွေ့မြင်ရစဉ်
ရေနစ်မြုပ်နေသော ကျောင်းကုန်းမြို့မြို့ မဈေး အရှေ့ ဘက်မြင်ကွင်း
19.8.2012 နေ့ကမြင်တွေ့ရတဲ့ကျောင်းကုန်းမြို့လယ် ဌာနလမ်းရဲ့ မြင်ကွင်း
19.8.2012 နေ့ကမြင်တွေ့ရတဲ့ကျောင်းကုန်းမြို့လယ် ရတနာပုံလမ်းရဲ့ မြင်ကွင်း
19.8.2012 နေ့ကမြင်တွေ့ရတဲ့ကျောင်းကုန်းမြို့အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်ရဲ့ မြင်ကွင်း
19.8.2012 နေ့ကမြင်တွေ့ရတဲ့ကျောင်းကုန်းမြို့အမှတ်(၃)ရပ်ကွက် မြင်ကွင်း
ယခု တင်ထားသော ဓါတ်ပုံများသည် ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားသည့် တစ်ပုံမျှ မပါရှိပါ။ မူရင်းဓါတ်ပုံရိုက်ကူးသူများကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ အများအကျိုး ဆက်လက်သယ်ပိုး နိုင်ပါစေ။
တို့၏ ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာများမှ ကူးယူတင်ပြပါသည်။
Posted by မိုးယံ at 2:35 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Labels: Facebook မှ သတင်းများ, မှတ်မှတ်ရရ
Maxthon3တော်တော်ကောင်းတယ်ပြောရမယ်.....
Mozilla Firefox ထက်ဆယ်ဆမြန်တဲ့ Maxthon3ပါ။ သုံးရတာလွယ်ကူပါတယ်။ ဘာ add on မှလည် ထည့်စရာ မလိုပါဘူး။
သူမှာအကုန်ပါပြီးသာပါ။ ဒါပေမယ့်သူက myanmar3ကို sport မလုပ်ပါဘူး။ Zawgyi တော့ လုပ်ပါတယ် ကယ်ကြိုက်တယ်ဆို အောက်ကမူရင်းလင့်မှာ သွားဒေါင်းလိုက်ပါ။ http://www.maxthon.com
Zawgyi Font သွင်းတာတော့ အပေါ်က ပုံအတိုင်းပါဘဲ။ မော်ဇီလာနဲ့ဖွင့်တယ်ဆို နှေးသလိုလိုဖြစ်နေတာ...အခု ဒီကောင်နဲ့ ဖွင့်တာတော့ မြန်နေတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။
Posted by Unknown at 11:49 PM 1 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ဖန်တီးလုပ်ကြံထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ အသုံးပြုပြီး သတင်းအမှား ထုတ်လွှင့်ခြင်း မပြုရန် ပြည်ပအခြေစိုက် တိဗက်ဘုန်းတော်ကြီးများအုပ်ချုပ
ဗုဒဘာသာနဲ့ မူဆလင် အုပ်စုတွေအကြား ပဋိပက္ခတွေ ပိုမိုကြီးမား လာအောင် တိဗက်ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ပါဝင်နေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို တစ်လွဲ
ဲအသုံးချပြီး ဆောင်ရွက်နေတာတွေ မပြုလုပ်ဖို့၊ ဒီဓါတ်ပုံတွေကို ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းရှိ သတင်းမီဒီယာများအနေနဲက အသုံး မပြုကြဖို့လည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
တိဗက် ဘုန်းကြီးတွေ ပါဝင်နေတဲ့ ဒီဓါတ်ပုံတွေကို မူဆလင်နိုင်ငံတွေက ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေမှာ ဖြန့်ဖြူးနေတာ ဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံက ဖြစ်စဉ်တွေကို သတင်းတင်ပြရာမှာ လူသေအလောင်းတွေရှေ့မှာ တိဗက် ဘုန်းကြီးတွေ မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ အသုံးပြု ဖော်ပြနေကြကြောင်း၊ ယင်းဓါတ်ပုံများမှာ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၁၄ ရက်နေ့က တိဗက်အရှေ့ပိုင်း Kyegudo (Yushul) မှာ မြေငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့စဉ်က ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓါတ်ပုံများသာ ဖြစ်ကြောင်း Central Tibetan Administration က ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မဟုတ်တဲ့ အခြားနိုင်ငံက ဖြစ်စဉ်တွေ ဓါတ်ပုံတွေကို အသုံးပြုပြီး ပုံကြီးချဲ့ သတင်းဖြန့်နေတဲ့ အင်တာနက်သတင်းတွေ အကြောင်းကို တူရကီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်မှာ နိုင်ငံတော် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ Central Tibetan Administration ရဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့ ကြေညာချက်ဟာ ဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေတာ မှန်ကန်နေကြောင်း သက်သေပြနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Following reports of recent clashes between Buddhists and Rohingya Muslims in Myanmar, certain sections of the media as well as social websites have portrayed photographs involving Tibetans to misinform the public and to leadahate campaign.
The recent ethnic clashes in the Indian northeastern state of Assam have raised further tensions.
The Dharamshala based Central Tibetan Administration inarelease yesterday said it was “deeply disturbed and concerned” over the circulation ofamisleading photograph in some section of the media showing Tibetan monks.
The release noted that many websites in the Muslim countries, especially Pakistan have usedaphotograph of Tibetan monks standing in front ofapile of dead bodies in their reports on the clashes in Myanmar.
“This photo of Tibetan monks was actually taken during their relief work in Kyegudo (Yushul), eastern Tibet, afteradevastating earthquake hit the region on 14 April 2010,” CTA clarified. “The Tibetan monks extended remarkable service in the rescue and relief operations at the time.”
Posted by မိုးယံ at 6:45 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Labels: Facebook မှ သတင်းများ
နေဇော်လင်း ဆိုက်မှ စာဖတ်ပရိသတ်များသို့ အသိပေးအပ်ပါသည်
http://www.nayzawlin.com/ စာဖတ် ပရိတ်သတ်များသို့ အထူး အရေးပေါ် အသိပေး အပ်ပါသည်။ ကျွန်တော်ရဲ့အင်တာနက် စာမျက်နှာကို ယခု ဆိုက်လိပ်စာ ပြောင်းထား ပါသောကြောင့် http://www.nayzawlin.com/သို့ဝင်ရောက်ပါက မိမိ လိုချင်သော သိချင်သော အရာများ မရရှိပဲ ဖြစ်နေပါမည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ယခုလက်ရှိ http://www.malaysiaonlineradiomedia.com/ ဖြင့် ဝင်ရောက်ကြပါရန် အသိပေး အပ်ပါသည်။ လေးစားလျှက် - နေဇော်လင်း ( မလေးရှား အွန်လိုင်း ရေဒီယို မီဒီယာ)
Source by :http://www.nayzawlin.com/2012/08/blog-post_8385.html
Posted by Unknown at 12:52 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by Unknown at 3:22 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် အများပြည်သူလိုက်နာနိုင်ရန်စေ ထုတ်ပြန်ထားသော ဆောင်ပုဒ်များအနက် “လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ဒို့ရန်သူ” ၊ “ပြည်ပအားကိုး ပုဆိန်ရိုး” ၊ “သင့်သွေးဖြင့် အသက်ကယ်ပါ” ၊ “ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တစ်ပါး” ၊ “သင့်ကြောင့် မီးမလောင်ပါစေနှင့်” ၊ “မီးသတိပြု” စသည့် ဆောင်ပုဒ်များစွာရှိပေသည်။
၇.၈.၂ဝ၁၂ (အင်္ဂါ)နေ့တွင် “ရေ သတိပြု” ဟူသော ဆောင်ပုဒ်တစ်ခု ထပ်မံထုတ်ပြန်ရမည့် အနေ အထားတရပ်သို့ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီ
ဟု ခေါ်ဆိုရတော့မည်။ အကြောင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိုးရာသီဖြစ်သည်နှင့်အညီ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် အရပ် ဒေသအချို့၌ ရေကြီးခြင်း၊ ရေလျှံခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည်။ ရေဘေးဒုက္ခသည်များ၊ အိုး/အိမ် ပစ် ရသည့် ဒုက္ခသည်များ၊ စားရေးသောက်ရေးခက်ခဲသူများ များစွာဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည်။
ထိုသူများထဲတွင် အိုးအိမ်ရှိပါလျှက်နှင့် နေရာအတည် တကျရှိပါလျှက်နှင့် ဘဝကိုရုန်းကန်ရပ်တည် နေထိုင်လျှက်ရှိသော မိသားစုများလည်းရှိသည်။ ထိုသူများထဲတွင် အမှတ် ၄ဝ၊ သခင်မြလမ်း၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ဈေးညစောင့် ဖြစ်သူ ဦးဝင်းဆွေ၊ ဇနီးဖြစ်သူ သပြေပန်းရောင်းချသူ မဥမ္မာသန်းနှင့် (၈) တန်းကျောင်းသား မောင်ခန့်ဝင်း အောင် တို့သည်လည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
၇.၈.၂ဝ၁၂ နံနက် (၆းဝဝ) နာရီခန့်တွင် သားဖြစ်သူ မောင်ခန့်ဝင်းအောင်သည် ကျောင်းသွားရန် အတွက် နေအိမ်၏ အရှေ့ဘက်အနီးတွင်ရှိသော ရေဖုံးလွှမ်းနေသော အမှတ် ၄ဝ၊ ဈေးစည်ပင်ရုံး အဆောက်အဦးဘေးသို့ ဒူးဆစ်ခန့်မြုပ်နေသောရေကို ဖြတ်လျှောက်သွားစဉ် . . . .
မိခင်ဖြစ်သူ မဥမ္မာသန်းသည်လည်း နေအိမ်တွင် စားဝတ်နေရေးအတွက် ဈေးအတွင်းသို့ သပြေပန်းရောင်းရန် သပြေခက်များအား စုစည်းသန့်စင်မှုပြုလုပ်နေစဉ် သားဖြစ်သူ မောင်ခန့်ဝင်းအောင်၏ အော်သံကိုကြားရှိကာ သားကျောင်းသွားရာလမ်းသို့ တရှိန်ထိုးသွားရောက်ကာ ကြည့်ရှုလိုက်စဉ် မောင်ခန့် ဝင်းအောင် အသက် (၁၃) နှစ် ရေနစ်နေသည် ဟုထင်၍ သား၏အသက်အား ကယ်တင်နိုင်ရန်အတွက် ရေထဲသို့အဆင်း မဥမ္မာသန်း အသက် (၃၈) နှစ်သည်လည်း သားအနီးသို့အရောက် အော်ဟစ်၍ ရေထဲသို့ လဲကျသွားပြန်တော့သည်။
ထိုစဉ် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးဝင်းဆွေသည်လည်း ဈေးညစောင့် တာဝန်ပြီးစီး၍ နေအိမ်တွင် ပြန်လည် အနားယူနေခိုက် ဇနီးနှင့်သားတို့၏ မခံမရပ်နိုင်အောင် အော်ဟစ်လိုက်သော အသံများကို ကြားသိသောအခါ သားဇော၊ မယားဇောတို့ဖြင့် ဇနီးဖြစ်သူနှင့် သားဖြစ်သူတို့အော်ဟစ် နေသော ရေအိုင်ထဲသို့ တရှိန်ထိုး ပြေးဆင်းတော့မည့်အခိုက်တွင်ဈေးအတွင်း၌ စားဝတ်နေရေးအတွက် ထမင်းကြော်ရောင်းနေသော ဈေးသည်တစ်ဦးမှ “မဆင်းနဲ့ … မဆင်းနဲ့ … ဓါတ်လိုက်နေတာ” ဟု အတင်းအကြပ်အော်ဟစ် တားမြစ်မှုကြောင့် ဇနီးဖြစ်သူ မဥမ္မာသန်းနှင့် သားဖြစ်သူ မောင်ခန့်ဝင်းအောင်တို့ သည် မိမိမျက်စိရှေ့မှောက်တွင် ငြိမ်သက်သွားသည်အထိ ရင်နင့်စွာဖြင့် ခံစားကြည့်ရှု နေရတော့သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်မှလည်း မည်သို့မှ အသက်နှစ်ချောင်းကို မကယ်တင်နိုင်ခဲ့တော့ချေ။ မြို့နယ်လျှပ်စစ်ရုံးမှ လာရောက်၍ စစ်ဆေးကြည့်ရှုသည့်အခါ စည်ပင်ရုံးဘေးတွင်ရှိ ဓါတ်မီးတိုင်အား လဲမကျသွားစေရန် ထိန်းထားသော ဆိုင်းကြိုးမှတဆင့် လျှပ်စစ်များဝင်ရောက်၍ ရေထဲသို့ လျှပ်စစ်များစီးဆင်းနေမှုကို တွေ့မြင် ရတော့သည်။
ဘဝတစ်ပါးသို့ ပြောင်းသွားသော မဥမ္မာသန်းနှင့် မောင်ခန့်ဝင်းအောင်တို့၏ ရုပ်အလောင်း အား မြောက်ဥက္ကလာဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်မှုပြုလုပ်ရန် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)သို့ ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားလာခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ အသင်းသူ/သားများ နှင့် ဝန်ထမ်းများတို့သည် ကွယ်လွန်သွားသော ရုပ်အလောင်းများ သယ်ဆောင်ရန်အတွက် နိဗ္ဗာန်ယာဉ် (၂) စီး ဖြင့် သွားရောက်ကူညီဖေးမ၍ မြောက်ဥက္ကလာဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ယင်းဖြစ်ရပ်အားပြန်လည်၍ သုံးသပ်ကြည့်ပါက ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် အိုးအိမ်အသက် ဆုံးရှုံးမှု များ ဖြစ်ခဲ့ရသလို ယခုကဲ့သို့ မထင်မှတ်သည့် ဖြစ်ရပ်များကြောင့်လည်း အသက်ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေ ကြောင်း သင်ခန်းစာရခဲ့သည်။
ထိုသို့သော အဖြစ်ဆိုးများ အချိန်မတန်ဘဲနှင့် ဘဝတစ်ပါးသို့ ထွက်ခွာခဲ့ရမှု များ မဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက် ပြည်သူ/သားများအားလုံးတွင် တာဝန်ရှိပေသည်။ မိဘများအနေဖြင့်လည်း ရေမြောင်း၊ ရေကန်၊ ရေအိုင်လေးများပါမကျန် မိမိတို့၏ ရင်သွေးငယ်လေးများအား သွားရောက်ဆော့ ကစားခြင်း၊ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ပြုလုပ်ခြင်းများကို သတိပေး တားမြစ်မှုများကို ပြုလုပ်သင့်ပေသည်။ ထိုသို့ တားမြစ်မှုသည် ကလေးသူငယ်များအား ချုပ်ခြယ်ခြင်း၊ ဟန့်တားခြင်း၊ ကလေးသူငယ်တို့၏ အခွင့်အရေး အား ချိုးဖောက်ခြင်း မဟုတ်ချေ။
ကလေးသူငယ်များအား အသိပေး နားလည်စေရန်အတွက် သင်ခန်းစာ ပေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ တတ်သိနားလည်သော ကလေးငယ်များ၏ စိတ်သန္ဓေတွင် လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်၊ သွားသင့်သွားထိုက်၊ စားသင့်စားထိုက်သော အမှန်တရားများကို သိရှိလာကာ လူ့ဘဝ သက်တမ်းတစ်လျှောက် ငြိမ်းချမ်းသာယာသောဘဝကို မိသားစုနှင့်အတူ ပျော်ရွှင်စွာလျှောက်လှမ်းနိုင် တော့မည် ဖြစ်ပေသည်။
ကမ္ဘာမြေပြင်တစ်ခုလုံးတွင် အချိန်မတန်ဘဲနှင့် မကြွေသင့်ဘဲ ကြွေလွင့်သွားရှာကြရသော ရင်နင့် ဖွယ်ရာ အဖြစ်ဆိုးများမှ ကင်းဝေးပပျောက်ကြပါစေဟု ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သလိုက်ရပါတော့သည်။
ုသတင်းဓာတ်ပုံအပြည့်အစုံကြည့်ရန် (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.453906244630618.106425.112990405388872&type=1 )
Posted by မိုးယံ at 9:53 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Labels: Facebook မှ သတင်းများ, မှတ်မှတ်ရရ, မြန်မာ သတင်း
Posted by Unknown at 11:28 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest